Waa kuma Cida ka dambeyso Fashilka Spain ee Euro 2016 Marca oo eeda dusha ka saartay Qaar kamid ah Xidigaha Dalkaas. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Waa kuma Cida ka dambeyso Fashilka Spain ee Euro 2016 Marca oo eeda dusha ka saartay Qaar kamid ah Xidigaha Dalkaas.
Waa kuma Cida ka dambeyso Fashilka Spain ee Euro 2016 Marca oo eeda dusha ka saartay Qaar kamid ah Xidigaha Dalkaas.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 28-06-16 8:26 AM Hadii aad u baahan tahay amaan iyo maha celin, waxaa kugu waajib ah inaad qabato shaqo fiican, hadii aad aragto iyadoo dadku wax kaa sheegayaan waxaa cad inaad waxaasi ugu yaraan lug ku leheyd, tani waxay heystaa David De Gea iyo Sergio Ramos.
Xidigahaan ayaa masuul ka ahaa wadar ahaa dhamaan goolashii laga dhaliyay xulkooda inkastoo mid kamid ah uu David De gea eeda la wadaagayay Gerard Pique, goolkii xalay hogaanka u dhiibay xulka Italy ayaana si sahal ah u ahaa mid niyad jab ku noqday Spain.
Sergio Ramos ayeey jariiradu ku sheegtay in si aan loo baahneyn uu qalad ugu galay Graziano Pelle albaabka hore ee xerada ganaaxa kooxdiisa, kubadii la soo tuurayna waxaan si aan laga fiirsad u badbaadiya De Gea laakin hadana ku soo celiyay shabaqiisa halkii uu isaga bixin lahaa kubada taasoo keentay in Pique uu isna il gaar ah u yeelan waayo Chiellini iyo Emanuele Giaccherini iyadoo xidiga Juve uu kubadii si sahal ah shabaqa u dhex dhigay.
Inkastoo uu sameeyay badbaadino cajiib ah kulankaas sidoo kalena qaatay abaalmarinta xidigi garoonka ugu fiicnaa kulankaas hadana De Gea ayaa geystay qaladaadkii ugu badnaa ee uu goolhaye geysto tartanka waana 3 jeer isagoo labo kamid ah sameeyay kulankii ay guuldarda kala kulmeen Croatia.
Guulihii Spain ee tartankan ee soo bilowday markii ay isla Italy ku reebeen gool ku laad Euro gii 2008 ayaa hadana ku soo dhamaaday gacmaha isla Italy.